सिरिञ्जले घोच्यो कि मनको बाघले खायो ? – erupse.com
सिरिञ्जले घोच्यो कि मनको बाघले खायो ?
उपत्यकामा केही दिनयता ‘सिरिञ्ज आक्रमणका’ घटना देखिए पनि अभियुक्त पक्राउ परेकाले अब सर्वसाधारणले त्रासमा रहनुपर्ने अवस्था नरहेको नेपाल प्रहरीले आश्वस्त पारेको छ ।
एकपछि अर्को ‘सिरिञ्ज आक्रमण’ का घटना भएको भन्दै काठमाडौंबासीमा त्रास बढिरहेका बेला प्रहरीले सुरक्षाबारे सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको हो ।
महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुलबहादुर थापाका अनुसार राजधानीमा सात वटा त्यस्ता घटनाका उजुरी आएका छन् । तर, कतिपयलाई भने ‘मनको बाघले खाएको’ देखिएको छ ।
अघिकांश घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको र निश्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको एसएसपी थापा बताउँछन् ।
युवतीहरुमाथि आक्रमण गर्ने घटनाका आरोपित रामेछाप घर भई नैकाप बस्ने सन्तोष कार्की विहीबार राति पक्राउ परिसकेका छन् । उनलाई प्रहरीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिकसमेत गरेको छ । कार्कीले ४ जनामाथि आक्रमण गरेको बताएका छन् । तर, प्रहरीसमक्ष विहीबारसम्म ७ वटा उजुरी परेका छन् ।
विदेशमा भएका उस्तै प्रकृतिका घटनालाई तुलना गरेर आक्रमणकारीले एचआईभी, हेपाटाइटिस बी जस्तो रोगको भाइरस फैलाइएको हुन सक्ने चिकित्सकहरुले आशंका गरेका थिए । त्यही आधारमा पीडितलाई ‘एन्टिडोड’समेत दिइएको थियो ।
अभियुक्त कार्कीले युवतीको हातमा काँटीले घोचेको दाबी गरेका छन् । तर, पीडित पक्षले घाऊको प्रकृति हेर्दा सिरिञ्जबाटै हमला भएको दाबी गरिरहेको अवस्था छ ।
तथापि, अभियुक्त पक्राउ परिसकेपछि अब यस्ता एकाध घटनाबाट सर्वसाधारणले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको एसएसपी थापा बताउँछन् ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै एसएसपी थापाले भने, ‘बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो जटिल स्थिति देखिएन ।… अब सर्वसाधारणले त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन ।’
प्रस्तुत छ, थापासँग अनलाइनखबर डकमले गरेको संक्षिप्त कुराकानी –
श्रृंखलावद्ध आक्रमणमा सिरिञ्ज आक्रमणमा संलग्न भनेर सन्तोष कार्कीलाई सार्वजनिक गर्नुभयो । अब सर्वसाधारणले त्रासमुक्त वातावरण बनेको मान्दा हुन्छ ?
हाम्रो अनुसन्धानले यो समस्या समाधान भएको देखिएको छ । हुन त सबै कुराको ग्यारेन्टी त हुँदैन । भोलि अर्को कुनै उछृङ्खल मनस्थिति भएको व्यक्तिले केही निकाल्न सक्ला, त्यो अलग कुरा हो । तर, जुन किसिमले हामीले अनुसन्धान गर्‍यौं, पीडितसँग गरिएको कुराकानी, घटनास्थलको अवस्था, वस्तुस्थिति, अपराधमा प्रयोग भएको सामग्री लगायत सबैलाई विश्लेषण गर्दा भोलिदेखि यस्तो घटना हुँदैन ।
त्यसो त यो घटना रोकिएको १३ दिन भइसक्यो । अब सर्वसाधारणले त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन । कोहीमा त्यस्तो मनस्थिति छ भने त्यो पनि मेटिन्छ । र, यस्तो घटना दोहोरिँदैन भन्ने कुरामा म व्यक्तिगतरुपमा र हाम्रो अपराध महाशाखा विश्वस्त छ ।
कार्कीले महाराजगञ्जबाट नैकाप जाने क्रममा युवतीलाई आक्रमण गरेको भनेका छन् । तर, काभ्रेमा पनि उस्तै घटना बाहिर आएको छ । त्यसतर्फ अनुसन्धान भयो कि भएन ?
बनेपाको घटना पनि हामीले हेर्‍यौं । बनेपामा अघिल्लो दिन एउटी महिला अर्को कुनै महिलासँग बाटो क्रस गर्ने क्रममा एकआपसमा टोक्किएको अवस्था रहेछ । त्यसमा हात जुध्दा कतै ठोक्किएको जस्तो फिल भएको रहेछ । घर पुगेपछि उनले दुःखेको जस्तो महसुस गरिन् ।
त्यतिवेलै सिरिञ्ज आक्रमण भनेर समाचार आइरहेको थियो । त्यसैले उहाँ हतास हुँदै प्रहरी र चिकित्सक कहाँ पुग्नुभएको रहेछ । हामीले पनि अस्पतालमै गएर सोधपुछ र अनुसन्धान गरेका थियौं ।
चिकित्सकले ठोकुवाका साथ के भन्नुभयो भने यो सिरिञ्ज होइन, कुनै बाहिरी चिजले घोचेकोजस्तो देखिन्छ । कतै घडीसडी वा चुराले ठोक्किएको हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो । हाम्रो अनुसन्धान टोली पनि त्यही निष्कर्ष निकालेर फर्किएको थियो ।
बाहिर आएका व्यापक हल्लाका कारण मनोवैज्ञानिक त्रासले पीडित हस्पिटलसम्म आएको जस्तो देखिन्छ ।
काठमाडौंको घटनामा कतिपयले वयानमा दुईजनाको समूहले आक्रमण गरेको भनेका छन् । अनुसन्धानले के देखाउँछ ?
होइन । वास्तविक अपराधी फेला नपरुञ्जेल विभिन्न मानिसले विभिन्न कोणबाट व्याख्या, विश्लेषण गरे । मिडियामा पनि त्यही ढंगबाट खबर आए । कुनै मिडियाले एक किसिमले व्याख्या गर्ने, कुनैले अर्को किसिमले गर्ने नभएका होइनन् । तर, सीसी टीभी फुटेजमै स्पष्टरुपमा देखिएको छ कि घटनामा एकजना मात्र संलग्न छन् । यद्यपि, हामीले घटनालाई विभिन्न पाटोबाट विश्लेषण गरिरहेकै छौं ।
पक्राउ परेका सन्तोष कार्कीले कतिजना युवती/महिलालाई आक्रमण गरेका रहेछन् ?
अहिले हाम्रो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनी चारवटा घटनामा संलग्न भएको देखिएको छ । जुन उनी आफैंले पनि स्वीकारिसकेका छन् । घटनाबारे प्रहरीमा ६ वटा उजुरी परेका थिए । जसमा एकजना युवतीलाई चाहिँ दुईपटक आक्रमण भएको भनिएको थियो ।
अरु दुईजनाको हकमा हामी फेरि फेरिफाइ गर्ने काम गर्छौं । किनभने, त्रास र डरले मात्रै उहाँहरुको उजुरी परेको पनि सक्छ ।
एउटा घटना कस्तो भयो भने आरएनएसीमा आक्रमण भयो भनेर एकजना महिला शुक्रराज ट्रपिकल सेन्टरमा उपचारका लागि आउनुभयो । उहाँ ७ दिनअघि भएको घटनालाई लिएर हस्पिटल आउनुभएको रहेछ ।
पीडित थपिनुभयो भनेर डाक्टरले भनेपछि हामी अनुसन्धान लागि त्यहाँ गयौं । त्यहाँ गएर बुझ्दा ७ दिनअघि टेम्पो चढेको अवस्थामा घटना भएको थाहा भयो । जब ट्याम्पु ब्रेक लाग्यो, त्यतिवेला उहाँलाई चसक्क दुखेछ । पछाडिपट्टि एकजना पुरुष रहेछन् । त्यसवेला ती व्यक्तिले कुनै प्रक्रिया नजनाएको उहाँले बताउनुभयो । उनी भागेका पनि थिएनन् ।
उहाँ गन्तव्यमा पुगेर उत्रिनुभयो । भोलिपल्ट चितवन जानुभयो । त्यहाँबाट फर्किएर आएपछि पत्रिकामा सिरिञ्ज आक्रमणको समाचार पढेर उहाँ मलाई पनि घोचेको थियो भन्दै आउनुभएको रहेछ ।
चिकित्सक र हाम्रो अनुसन्धान टोलीले घ्याच्च बेक्र लाग्दा शरीरमा घोचेको जस्तो महसुस भएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । किनकि, ती व्यक्ति आत्तिएको अवस्थामा पनि थिएनन् ।
अहिले यस्ता थुप्रै घटना प्रहरी र अस्पतालमा आइरहेका छन् । तर, अधिकांश मनको डर मात्र भएको देखिएको छ । हामीले बाँकी रहेका दुई घटनाका पीडितसँग पनि पुनः सोधपुछ गरेर अनुसन्धान गर्दैछौंं ।
प्रहरीले जुन किसिमले अनुसन्धान गरेको छ, त्यसमा पीडित र सर्वसाधारणले अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनकि, हरेक वस्तुस्थितिले कार्की नै घटनामा संलग्न भएको देखाइसकेको छ
त्यसोभए कार्कीले स्वीकारेका चारवटा बाहेक अरु सबै घटना वास्तविक होइनन् त ?
अम्… अहिल्यै त्यो भनिहाल्न पनि सकिन्न । उसले चारवटा मात्रै हानेको भनेको छ । तर, हामी फेरि भेरिफाइ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । सातवटै घटनामा संलग्न भएर उसले ढाँटेको पनि हुन सक्छ । त्यसो त पीडकलाई ‘मिसअन्डरस्ट्याण्डिङ’ पनि भएको हुनसक्छ । त्यो पाटोबाट पनि अनुसन्धान हुन्छ ।
कार्कीले युवतीमाथि आक्रमण गर्नुको कारण के रहेछ ? कसरी आक्रमण गरे ?
कार्कीले सुरुमा टायरभित्र हुने सिन्काले आक्रमण गरेको बताएका छन् । त्यसपछि चाहिँ ढलानको काँटी प्रयोग गरेर आक्रमण गरेको भनेका छन् ।
हामीले अनुसन्धानका क्रममा कार्कीको पारिवारिक र व्यक्तिगत विषयका विगतलाई केलाएका थियौं । उनलाई कुनै रोग लागेको थियो कि ? लागूऔषध दुव्र्यसनी पो थिए कि ? भन्ने कोणबाट खोजी गरियो । तर, त्यस्तो असहज कुरा केही देखिएन ।
हामीले विभिन्न विज्ञसँग परामर्श पनि गर्‍यौं । कतिपय अवस्थामा यस्तो घटना मानसिक समस्या पनि हुन सक्छ । अलिकति राम्री महिलालाई देखेर उत्तेजित हुने खालका पुरुष पनि हुँदा रहेछन् । त्यही मनस्थितिबाट एउटी राम्री युवतीलाई देखेको अवस्थामा कार्की एक्साइटेड भएको हुन सक्छ ।
उसले क्षणिक आनन्द र असन्तुष्टिका लागि हर्कत गरेको हुन सक्ने प्रवल सम्भावना देखिएको छ । यद्यपि, भोलि विस्तृतरुपले अनुसन्धान गर्दै जाँदा थप कुरा खुल्न सक्ला ।
कुनै रोगको औषधि लिँदै थिए कि ?
भोलिका दिनमा हामी चिकित्सकसँग पनि पनि सरसल्लाह गर्छौं । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन ।
तर, पीडकले घाँटीले घोचेको भने पनि पीडित परिवार र सर्वसाधारणले उनको वयानप्रति संशय व्यक्त गरेका छन् । उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
उहाँहरुले आशंका व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो । उहाँहरुमा जुन मानसिक पीडा थियो, त्यो यहाँ व्याख्या गरेरमात्र सम्भव हुँदैन ।
यो घटना चैतको अन्तिम साताको थियो । घटनाका पीडित तीन महिनासम्म कुन पीडामा बस्नुभयो भन्ने कुरा उनको ठाउँमा तपाईं, हामी बसेर हेर्दा चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक लाग्छ ।
सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यमबाट एचआईभी एड्स, हेपटाइटिस लगायतका विषय आएको हुनाले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय थियो । र, त्यस्तो चिन्तामा परेकाहरुलाई के लाग्छ भने यो सामान्य घटना होइन । यो ठूलो घटना हो भन्ने उहाँहरुलाई लाग्छ ।
तर, प्रहरीले जुन किसिमले अनुसन्धान गरेको छ, त्यसमा पीडित र सर्वसाधारणले अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनकि, हरेक वस्तुस्थितिले कार्की नै घटनामा संलग्न भएको देखाइसकेको छ ।